Home Wararka (Deg Deg) Midowga Murashaxiinta oo eedeeyay Rooble, gebi ahaana qaadacay Doorashada BFS
(Deg Deg) Midowga Murashaxiinta oo eedeeyay Rooble, gebi ahaana qaadacay Doorashada BFS
Shir maalmahan uga socday Magaalada Muqdisho Midowga Murashaxiinta ayaa lagu dhaliilay qaabka uu u wado Doorashooyinka RW xilgaarsiinta Rooble, waxayna sidoo kale eedeyn weyn dusha ka saareen Guddiyada Doorashooyinka heer Gobol ee SIET iyagoo ku eedeeyay in aanay madax bannaaneyn oo si toos ah uga amar qaataan Madaxda Maamul Goboleedyada.
Midowga ayaa ugu baaqay in Beesha Caalamka aanay sheeda ka fiirsan boobka Doorashada oo aay tilmaamaan qalalaadka Doorashada iyo Boobka, Waxay Midowga Murashaxiinta u sheegeen Beesha Caalamka in aay qeyb ku yeelan doonaan xasilooni darrada ka dhalata Boobka Doorashada haddii aanay tilmaamin Boobka lagu hayo Doorashada
Waxay Midowga sheegeen mar haddii ay meesha ka baxeen dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada, waxay doorashadii la sugayey isku bedeshay boob qaawan oo dalka u horseedi kara khilaaf siyaasadeed, xasillooni darri, iyo burbur ku yimaada dawladnimada.
Haddaba, Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalaamkaba u caddaynayaa.
In waxa socdaa aan lagu tilmaami karin doorasho oo ay tahay boob qaawan oo dalka u horseedi kara qalalaase siyaasadeed, xasillooni darri iyo nabadgelyo la’aan.
In Goluhu uusan raalli ka ahayn, aqbalayn, qaybna ka noqon doonin boobka socda ee lagu dibindaabinayo shacabka Soomaaliyeed, laguna burburinayo geeddi-socodkii nabadda iyo dhismaha dawladnimada.
In aan la fiirsan karin sida ay wax u socdaaan, sidaas darteedna Goluhu wuxuu watadashi la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada, si loo helo xal qaran oo dalka looga samatabixiyo halista ku soo fool leh xasilloonida, dawladnimada iyo wadajirka ummadda.
In madaxda dawladda Federaalka iyo Dowlad-goboleedyada ay qaadayaan mas’uuliyada natiijada ka dhalata boobka doorashada.
In ay shacabka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan ajandaha gurracan ee lagu hagardaamaynayo dawladnimada, xasilloonida siyaasadeed iyo wadajirka ummadnimo, garabna nagu siiyaan samatabixinta dalka.
In beesha caalamka aysan indhaha ka laaban boobka doorashooyinka, fartana ku fiiqaan hufnaan la’aanta doorshada, aysanna sugin cawaaqib xumida ka dhalan karta boobka socda.
Previous article4tii maalin ee Rooble qabsay labaa hartay wax tilaabana ma qaadin! Maxa talo u ah Midowga Musharaxiinta?
Next articleCiidamadii Saciid Deni duldhigay Boosaaso oo cabsi ku abuuray shacabka
Wadooyinka Muqdisho oo saakay Xiran iyo Shacabka oo lugtooda maalaya!!
Madasha Badbaado Qaran oo shir ku dhawaaqay